बच्चा न‘हुने महिलालाई बच्चा हुने,ब”नाइदिने भन्दै पं/डित आफैं जुटेपछि। |
बच्चा न‘हुने महिलालाई बच्चा हुने,ब”नाइदिने भन्दै पं/डित आफैं जुटेपछि।
November 18, 2021 adminLeaveaComment on बच्चा न‘हुने महिलालाई बच्चा हुने,ब”नाइदिने भन्दै पं/डित आफैं जुटेपछि।
बिवाहित जोडिको बच्चा हुनु एक जैविक प्रकृया हो । यो प्रकृया असन्तुलित भए बच्चा नहुनसक्छ ।यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले केही उपायहरु समेत पत्ता लगाएको छ ।तर कोही कोही धार्मिक अनुष्ठानमा बिश्वास गर्छन् ।
त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस थिए ।जो यस मामिलामा त्यहाँ चर्चा पाएका थिए । आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार स्थानीय व्यक्तिले सूचना पाएपछि घटनास्थलमा पुगे ।संसारमा कहिले काँही निकै अचम्म लाग्दा खबर आउने गर्छन । हालै स्पेनवाट यस्तै अनौठो समाचार आएको छ ।
स्पेनमा एक गोरी महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो आ’रोप लगाइन् ।तानाशाही चाहे जति गर सरकार तर पनि जनताको आवाज कुल्चन सक्दैनस ।पति पत्नीमा निकै हार्दिकता थियो । तर जव महिला सुत्केरी भइन् सबै माहौल एकाएक परिवर्तन भयो ।
उनले बच्चा देखेपछि कसैले नसोचेको आरोप पतिलाई लगाइन् ।आफुले कालो वर्णको बच्चा जन्माएपछि ति महिलाले श्रीमानलाई अरु कुनै कालो वर्णको महिलासंग सम्पर्क राखेको आरोप लगाएकी छन् । यो घटना जामोरा (सपेन) को अस्पतालमा केही समय अघि सम्म सबै ठिक थियो ।एकै छिनमा अस्पतालमा हल-चल भयो।
महिलाले जन्म दिएको बच्चा गोरो थिएन । त्यो कालो रङ्गको थियो । यस्तो थाहा पाएपछि महिला आफ्ना पतिसङ्ग रिसा’इन । लेवर रूममा बच्चा को जब सम्पूर्ण सानो शरीर बाहिर आयो,डाक्टरले चाँडै पत्ता लगाए कि बच्चा एकदम सही छ, एक कालो केटा ।
उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । तर जब चिकित्सकले उनलाई बच्चा हातमा दिए उनी बच्चा देखेर अचम्म परिन् । उनले अचम्मको ब्यवहार पनि देखाइन् ।
यसरी पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपियाँ पर्न जाने?
छतमा कपाल सुकाइरहेकी थिइन् यि किशोरी,अचानक उनको जीवनमा आयो यो कस्तो आपत?
मोदीको शरणमा प्रचण्ड!भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहियो
पुनःउपत्यकामा लाग्ने भयो नयाँ नियम,अब काठमाडौं जानेलाई यस्तो हुने